Semalt को नयाँ डिजाइन नेभिगेट कसरी र गुगल मा उच्च रैंक गर्न को लागी
यसले your० मिलिसेकेन्ड लिन्छ प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईंको वेबसाइटको मत विकास गर्न। प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूका साइटहरूमा प्रयोग गर्न एक सरल ईन्टरफेस खोज्छन्। जबकि यो तपाइँको वेबसाइटको एक पक्षको लागि राम्रो सल्लाह हो, Semalt ले यो नयाँ वेबसाइटमा लागू गरेको छ ।
Semalt को नयाँ वेब पेज सजीलो को लागी ईन्टरफेस को साथ एक चिकना, आधुनिक डिजाइन को संयोजन गर्न को लागी कोशिश गर्दछ। यो डिजाईनको साथ, Semalt ले यसलाई बुझ्नको लागि सजिलो बनाएको छ कि कसरी तिनीहरूले तपाईंलाई गुगल शीर्षमा पुग्न सक्छन्।
एसईओ टर्मिनोलजीको एक द्रुत समीक्षा
हामी शीर्षकको मासुमा पुग्नु भन्दा पहिले, केही आवश्यक jargon बारेको सामान्य समझ हुनु आवश्यक छ। हाम्रो ब्लगको एसईओ मा एक विस्तृत गाइड छ यदि तपाईं आधारभूत मा गहिरो खन्न चाहानुहुन्छ भने। यस कथाको लागि, हामी केहि आधारभूत परिभाषाहरूमा जानेछौं।
SEO खोज ईन्जिन अनुकूलन को अर्थ हो। यो तपाईको वेबसाइटलाई इन्टरनेटमा खोज्न सजिलो बनाउने प्रक्रिया हो।
AutoSEO Semalt द्वारा जारी गरिएको उत्पादन हो जुन धेरै पैसा लगानी नगरी SEO मा जान चाहनेहरूको लागि हो।
फुलसेओ AutoSEO को उन्नत संस्करण हो जुन SEO विशेषज्ञ र प्रबन्धकसँग काम गर्ने कुरामा जोड दिन्छ।
SSL एक सुरक्षा सुविधा हो जुन तपाईंको वेबसाइटमा भण्डार गरिएको ग्राहक डाटालाई बढी सुरक्षित बनाउँदछ।
कुञ्जी शब्दहरू विशिष्ट शब्दहरू वा वाक्यांशहरू हुन्छन् जुन मानिसहरूले तपाईंको वेबसाइट फेला पार्न खोज्दा।
श्रेणीकरण भनेको तपाईको पृष्ठ, वा कीवर्ड, खोज ईन्जिनमा देखा पर्दछ।
ट्राफिक तपाईंको साइटमा जाने व्यक्तिको संख्या हो।
नयाँ Semalt वेबसाइट बुझ्दै
AutoSEO, FullSEO, र SSL अझै पनि उत्पादनहरू हुन् जुन Semalt ले तपाईंको साइटलाई पुश गर्न प्रयोग गर्दछ। विषय मा हाम्रो अघिल्लो ब्लग पोस्टमा भने अनुसार, यी सबै मान्यता प्राप्त उत्पादनहरू हुन् जुन सफलताको प्रमाणित ट्र्याक रेकर्ड छन्। यदि तपाइँ उत्पादन लाइन-मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, कृपया पुरानो पोष्ट हेर्नुहोस्।
यो ब्लगका लागि हामी नयाँ वेबसाइटका नयाँ सुविधाहरू र डिजाइन तत्त्वहरू अन्वेषण गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं। Semalt केहि प्रभावशाली सुविधाहरु लाई अधिक जान लायक कार्यान्वयन गरेको छ।
खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठहरू (SERP)
गुगल वेबमास्टरहरूको लागि
नयाँ Semalt ड्यासबोर्ड बुझ्दै
नयाँ ड्यासबोर्डमा अझै पनि पुरानोबाट धेरै शक्तिशाली फिल्टरहरू छन्। महत्त्वपूर्ण भिन्नता इन्टरफेसको परिवर्तनबाट आउँदछ जुन प्रयोगकर्ताको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
जब तपाई तल स्क्रोल गर्नुहुन्छ, तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि तपाईको कुञ्जी शब्द शीर्ष १०, १०, 30०, र १०० मा छन्। यो ड्यासबोर्डले तपाइँलाई तपाइँको उत्तम प्रदर्शन गर्ने कुञ्जी शव्दहरू के हो भनेर एक विचार दिन्छ। तपाईले यस जानकारीलाई विशेष, खोज्न योग्य कुञ्जी शब्दहरूमा जोड दिन सक्नुहुन्छ।
तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ किवर्डको सेट तपाईको वेबसाइटमा रूपान्तरण बिक्री ल्याउनमा बढी उपयोगी छ। Semalt को SEO ड्यासबोर्ड तपाईलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्दछ कि कुन कुञ्जी शब्दले अधिक यातायात ल्याउँछ। तपाईंको वेबसाइटमा लेनदेनको संख्यामा डाटाको साथ संयुक्त, तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं गलत प्रकारको ट्राफिकलाई आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ।
खोज इञ्जिन परिणाम पृष्ठ (SERP) बुझ्दै
एक खोज इञ्जिन नतीजा पृष्ठले तपाईंलाई कसरी तपाईंको वेब पृष्ठ खोजीमा क्रमश: मा विस्तृत जानकारी दिन्छ। यसले तपाइँलाई कुन कुञ्जी शव्दहरू क्रमबद्ध गर्दै छन् र कसरी तपाइँको पृष्ठमा लैजान्छ भन्ने बारेमा विस्तृत जानकारी दिन्छ। यसले अन्य धेरै एसईओ वेबसाइटहरूसँग नभएको जानकारी प्रदान गर्दछ: प्रतिस्पर्धीहरूका बारे जानकारी।
तपाईले आफ्नो मनपर्ने खोजी ईन्जिनले यो तुलना क्रमबद्ध गर्न पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल विश्वमा नम्बर एक खोजी ईन्जिन हो, तर यदि तपाइँ याहू वा बिंग प्रयोगको माध्यमबाट सम्भावित दर्शकहरू फेला पार्नुभयो भने, तपाईले त्यहाँ अझ राम्रो क्रममा राख्नको लागि विशेष कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ एक अभियान सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई सबै तीन इन्जिनहरूमा हराउन खोज्छ।
SEO विचार गर्दा, Semalt बुझ्दछ कि डाटा सबै कुरा छ। धेरै कम्पनीहरूले गुगल AdWords प्रोजेक्टहरू सिर्जना गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, तर यो केवल एक छोटो अवधिको समाधान हो। विज्ञापनले तपाईंको साइटको खोजीसँगै समयसँगै सुधार गर्दैन, तर तपाईंलाई पैसाको साथ समाप्त हुने अस्थायी बृद्धि प्रदान गर्दछ। एसईओको साथ मनमा बनाइएको वेबसाइटहरू यी पृष्ठहरूको शीर्ष स्वाभाविक रूपमा हिट गर्दछन् र नियमित रखरखावको साथ उच्च श्रेणीमा जारी रहनेछ।
पृष्ठ अद्वितीय जाँच के हो?
एसईओ एक चीज हो जुन प्राय जसो तपाईं सिर्जनात्मक रूपले अद्वितीय हुन आवश्यक पर्दछ जबकि तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरू जस्तो कुञ्जी शब्दहरूको लागि श्रेणीकरण गर्दछ।
Semalt का पेशेवर SEO लेखकहरूले यस विषयलाई तपाईलाई अद्वितीय कीवर्डहरू प्रदान गरेर पहिचान गर्दछन् जुन क्रमबद्ध हुन्छन् र साथै लेखकलाई पनि प्रदान गर्दछ जसले विशेष सामग्री लेख्न सक्छ। SEO एक नाजुक सन्तुलन हो, तर Semalt पहिले नै केसहरू छन् जुन यसको सफलतासँग बोल्दछ।
उदाहरण को लागी, मानिलिनुहोस् तपाईं एक स्वतन्त्र सामग्री लेखक हुनुहुन्थ्यो जो भर्खरको व्यवसायमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईलाई पृष्ठ थोरै र्याँ्क लिन केही मद्दत चाहिन्छ। तल तपाईंको पृष्ठबाट सानो अंश छ जुन नयाँ Semalt वेबसाइटको पृष्ठको विशिष्टता क्षेत्र द्वारा स्क्यान गरिएको थियो।
तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि त्यहाँ प्राय: पृष्ठमा हाइलाइटहरू छन्। सामग्री परीक्षकको माध्यमबाट यसलाई चलाए पछि, यसले यो पहिचान गर्‍यो कि यी सेक्सनहरू वेबमा अन्य स्थानहरूमा छन्। परिणाम स्वरूप, यस पृष्ठको विशिष्टता १iqu प्रतिशत विशिष्टता स्कोरमा छ।
खोजी ईन्जिनले सामग्रीलाई दर्जा दिन सम्भावना बढी हुन्छ यदि यसलाई आधिकारिक वा विश्वासनीय स्रोत मानिन्छ। एक तरिका खोजी ईन्जिनले सामग्रीको विशिष्टताको माध्यमबाट यसलाई निर्धारण गर्दछ। एसईओ सान्दर्भिक कुञ्जी शब्दहरूको खोजी गर्न दृढ संकल्पित छ, जुन धेरै साइटहरूले साझा गर्न सक्दछन्, भीडको बीचमा बाहिर खडा गर्न नसक्ने वेबसाइट नराम्रो स्तरमा जारी रहनेछ।
Semalt एक कम्पनी हो जुन यस बारे सचेत छ। यसलाई हाम्रो SERP सँग जोडेर, हामी प्रभावकारी रूपमा निर्धारित गर्न सक्छौं कि रणनीति परिवर्तन आवश्यक छ वा छैन। तपाईं शीर्ष १०० मा यसको लागि सीमित विचारको साथ श्रेणी गर्न पर्याप्त योग्य हुन सक्नुहुन्छ। अझै, शीर्ष १० लाई तपाइँको व्यवसाय आवाश्यक सामग्रीको साथ विशिष्ट खोजशब्द लक्षित गरेर फरक गर्न आवश्यक पर्दछ।
Semalt को साथ गुगल वेबमास्टरहरूको लागि ट्र्याकिंग
विश्वको सबैभन्दा ठूला कम्पनी मध्ये एकको रूपमा, तपाईं पहिल्यै सचेत हुन सक्नुहुन्छ कि Google सँग निगरानी प्रदर्शनको लागि धेरै उपकरणहरू छन्। Semalt ले यसको बृद्धि गर्न SEO विशेषज्ञहरू र प्रबन्धकहरूको टोलीको उपयोग गरेर त्यो प्रदर्शनलाई पूरक बनाउँदछ। अझै, वेबमास्टरको कार्यक्रम मुनि पहिले नै Semalt सँग पनि तपाईंको लागि एक समाधान छ।
तिनीहरूको वेबसाइटबाट एक HTML फाइल डाउनलोड गरेर र यसलाई तपाईंको वेबसाइटमा अपलोड गरेर, Semalt ले अधिक विस्तृत डाटा ट्र्याक गर्न सक्दछ। तपाईं आफ्नो साइटमा पनि HTML टाँस्न रोज्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग यस प्रक्रियाको बारेमा कुनै गडबड छ भने, उनीहरूको ग्राहक समर्थन ईमेलमा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। यदि तपाईं अर्को च्यानल चाहानुहुन्छ भने, तिनीहरूको सम्पर्क जानकारी प्रत्येक पृष्ठको तल छ।
साथै, Semalt मा सिधा डाटा अपलोड गर्दा स्थानहरूको संख्या कम गर्दछ जहाँ तपाईं आफ्नो डाटा ट्र्याक राख्नुहुन्छ। यो भन्दा पहिले तपाईसँग एक वेबसाईटको ड्यासबोर्ड हुनसक्दछ, किवर्ड एनालिटिक्सका लागि एउटा प्यानल, र अर्को साइटम्याप डेटाका लागि। Semalt को साथ, ती सबै एक साइटमा छ।
पृष्ठ गति विश्लेषक र कसरी यसले तपाईंको SEO लाई असर गर्न सक्छ
जब यो एसईओ को लागी आउँछ, तपाईं सम्भवतः आफ्नो पृष्ठ को गति को लागी केहि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने बारे सोच्नुहुन्न। जे होस्, तपाईंको पृष्ठ को लोडिंग दर एसईओ मा एक ठूलो प्रभाव छ।
कुञ्जी शब्द "अप्टिमाइजेसन" मा छ, राम्रोसँग अप्टिमाइज गरिएको साइट एक हो जुन टुटेको लिंकहरू, छोराहरू, र चाँडै लोडहरू नभएको छ। जब SEO विशेषज्ञहरूको Semalt को टीमले वेबसाइटमा पहुँच गरेको छ, तिनीहरूको विश्लेषणले यी टुक्रिएको पोइन्टहरू प्रकट गर्दछ र निश्चित गर्दछ कि केवल ग्राहकको लागि प्रासंगिक जानकारी लोड हुन्छ।
व्यक्तिलाई त्यो mill०-मिलिसेकेन्ड ध्यान अवधि मा पहिलेको स्थिति दिएर, यो सजीलो छिटो पृष्ठ हुनु महत्वपूर्ण छ। तल ड्यासबोर्ड छ जुन तपाईं आफ्नो गति ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने, हामी प्रयोग गरिरहेका पृष्ठ उदाहरण उत्कृष्ट छ। यसमा केही सामान्य त्रुटिहरू छन् जुन तपाईं ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, तर ती केही सम्भावित बिक्रीको लागि महत्वपूर्ण मोड हुन सक्छ। जे होस्, यो ड्यासबोर्ड डेस्कटप संस्करण को लागी विशिष्ट छ। यदि हामी यस वेब पृष्ठको मोबाइल संस्करणमा हेर्छौं, यसले केहि फरक गर्दछ।
Americans१ प्रतिशत अमेरिकीहरूले स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहेकाले तपाईले मोबाइल अप्टिमाइजेसनको आवश्यकतालाई चिन्नु पर्दछ। माथिको उदाहरणले भन्छ कि यो वेबसाइट यसको प्रतिस्पर्धीहरु बीच औसत हो। यद्यपि, Semalt ले काम गर्दछ जुन तपाईंलाई औसत भन्दा माथि उठाउँछ।
Semalt को नयाँ ड्यासबोर्डले कसरी गुगल शीर्षमा पुग्न मद्दत गर्दछ?
डाटाको मात्रा जुन तपाईले प्रत्येक दिन उपभोग गर्नुहुन्छ भारी छ। नतिजाको रूपमा, दैनिक ग्राइन्डको साथ जारी राख्न असम्भव हुन सक्छ। जब तपाइँ तपाइँको नियमित गतिविधिहरू एक वेबसाइटको प्रबन्धको साथ मालिकको रूपमा संयोजन गर्नुहुन्छ, दुईजना एक अर्काबाट अलग हुनेछन्।
Semalt को प्रक्रिया साईट प्रबन्धन प्रक्रियालाई सरल बनाउने तरिका हो जहाँ तपाईं तपाईंको ध्यान पछाडि निर्देशित गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ यो हुनु आवश्यक छ: तपाईंको व्यवसाय। Semalt विशेषज्ञहरु को समर्पित समूह को साथ SEO को माध्यम बाट तपाईलाई मार्गदर्शन गर्न खुशी छ, तपाईं गुगल को शीर्ष बीचमा पाउनुहुनेछ।
ड्यासबोर्ड Semalt को परिणाम हो उपभोक्ताले के चाहान्छ भन्ने पहिचान गर्ने प्रक्रियाको परिणाम हो। एक साधारण प्रणालीको साथ, हामी यो कुरा सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि तपाईले आफ्नो एसईओ अभियानको व्यवस्थापनको बारेमा मात्र नियमित अपडेटहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छैन, तर तपाईले यी अभियानहरूले तपाईंको व्यवसायमा ल्याउने बृद्धिलाई बुझ्नुहुन्छ र चिन्नुहुन्छ।
यदि तपाईं एक व्यवसाय मालिक हुनुहुन्छ र यातायात संलग्न गर्न चाहानुहुन्छ, Semalt एक स्थानमा पुग्नको लागि तयार छ जहाँ तपाईं ट्राफिक तान्न सक्नुहुन्छ, ग्राहकलाई संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ, र बिक्री बढाउन सक्नुहुन्छ।